mairie-antananarivo – Fanamboarana dabilio teny amin’ny EPP Nanisana sy Manjakaray
Fanamboarana dabilio teny amin’ny EPP Nanisana sy Manjakaray
auteur 8 febroary 2017 Commentaires fermés
Nanamboatra dabilio teny amin’ny EPP Nanisana sy Manjakaray manodidina ny 100 isa ny ekipa teknika avy ao amin’ny Boriboritany fahadimy ny 06 sy 07 Febroary 2017. Ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Rtoa Lalao Ravalomanana nandritra ny fitsidihany ireo sekolim-panjakana ireo no nanampy rehefa nahita fa simba sy tsy ampy ny dabilio ho an’ny mpianatra.
Nangataka fiaraha- miasa teny anivon’ny kaominina ny Talen’ireo sekoly ireo nohon’ny fahamaroan’ireo dabilio simba. 1180 ny isan’ireo mpianatra ao amin’ny sekoly iray, tokony ho 2 isaky ny dabilio ny mpianatra amin’ny latabatra iray kanefa manjary 4 izy ireo ankehitriny. Dabilio 200 hatramin’ny 300 isa eo no ilaina vao afaka manaraka ny fenitra ny fipetrahan’ireo mpianatra, ary afaka miaina malalaka izy ireo ao an- tsekoly.
Nambaran’ireo Talen- tsekoly fa tena sahirana ny EPP amin’ny tsy fahampian’ny fotodrafitr’asa sy ny fitaovana entina mampianatra. Manao antso manokana amin’ny fiadidina ny tanànan’Antananarivo izy ireo mba hijery ny ho avin’ ireo ankizy mianatra eny anivon’ny sekolim- panjakana.